Best Zoro Object Games maka Android i
Gị search maka kasị mma zoro ihe egwuregwu akwụsị ebe a! Puzzle egwuregwu ma ọ bụ zoro ezo egwuregwu na-adịkarị mara ha Ntụpụta elo na ezi uche ịma aka. Ọkachamara nwere ike ikwu na nke a free zoro ihe egwuregwu n'ihi na android genre dị ka IQ na-akpali akpali egwuregwu. Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ egwuregwu na-agụnye egwuregwu mgbagwoju anya; Otú ọ dị, a n'ezie mgbaghoju anya egwuregwu ụtụtụ na unraveling zoro ezo akpọkwa dị ka a isi gameplay edinam. E wezụga zoro ihe egwuregwu nwere ikike ime ka ufiop arụmụka ezi uche ike, ọ na-maara nke ọma maka eke zuru mkpali, fun jupụtara mmetụta uche, na oké ohere maka Player tụsaratụ na-enwe ha. Ndị mmadụ bụ ndị nwere mmasị egwuregwu mgbagwoju anya na-emekarị nanị site enweghi ike ịnweta iche na-egwu na na. Ke ibuotikọ emi ị ga-achọpụta ụfọdụ nlezianya họrọ zoro ezo ihe egwuregwu n'ihi na Androids ekwentị, nụ ụtọ ha.
1. Ọchịchịrị Arcana
Google play download njikọ
Ọchịchịrị Arcana (nke ngagharingosi) bụ a aha e nyere a omimi ngagharingosi na agafe n'ime obodo na-eweta ya ụfọdụ unsettling omimi ikuku. Players Na-enwe ike inyocha òtù abụọ: otu nwetụ ụgbọelu na-adịgide ndụ n'azụ ngagharingosi mgbidi na ata ụwa. Na egwuregwu a, egwuregwu na-dọkpụụrụ tinyere-ekpughe ihe nzuzo nke mmadụ ochie ahụ na-akpọ onye ọjọọ na-achọpụta na ọdachi akụkọ nke ngagharingosi ọrụ. Ọ bụrụ na ị na-achọ kechie ụbụrụ gị gburugburu omimi omume ma na mgbe chọrọ igwu egwu Sherlock Holmes, gị ohere amalite ebe a.
2. abis (iwe nke Eden)
Platform: Android, iOS, Windows, na Mac.
Abis egwuregwu mgbagwoju anya na-agụnye ịgagharị bukọrọwo mmiri n'okpuru osimiri na-akpali mmasị akụkụ, atụmatụ, akụ na-otu ugboro nwere ndị ji nwayọọ nwayọọ na-ala n'iyi. E nwekwara oké ekwe omume nke izute oké osimiri ụmụ anụmanụ dị ka shark na egwu kpuchiri ihe n'ihu shapes na-enwe obi ụtọ na n'igbu odachi na mbibi na-agụnye ekwe omume nke na-anwa igbu gị. Ò nwetụla mgbe ị chọrọ isonye na a free zoro ezo ihe egwuregwu n'ihi na android mgbaghoju anya jupụtara horrific ọgụgụ na akpọkwa? Abis iwe nke Eden bụ nnọọ n'ihi na ị.
3. Special Enquiry Ihe
Platform: Androids version 2.3.3 gbakwunyere
Forensic nchọpụta chọrọ! Ị nwere ihe ọ na-ewe iji tinye aka n'ife n'ime ụwa nke investigative mgbaghoju anya nke na-anwale gị nkà nke iji unveiling omimi ikwa? Ma eleghị anya, ị dị nnọọ chọpụtara a gara aga oge na ga-aka gị nkà nke na-ekpughe elekere na daga gameplay edinam. Ebe a na-a egwuregwu jupụtara aghụghọ, omimi ikwa, nrụrụ aka, na ime ihe ike dị ka gị na mgbe mara n'ihu.
4. Akwụkwọ si enweghị ebe 2
Ọ bụrụ na ị na-akpọ prequel ka akwụkwọ ozi si enweghị ebe, mgbe ahụ ọsọ ọsọ anya n'ihi na ya dị nnọọ ga-efu na ụwa nke omimi akwụkwọ ozi egwuregwu. Akwụkwọ ozi si enweghị ebe atụmatụ Audrey ndị gbakọtara akwụkwọ ozi na enyem-aka nke a nwụrụ anwụ ekesa akwụkwọ ozi na-atụ anya na akwụkwọ ozi ga-eduzi ya ka ya efu di. N'ụzọ dị mwute, ọ na-dugara a mọ obodo.
5. Gosipụtara omume nke Albion
Enyo ndị Albion bụ ihe na-akpali akpali na-akpali akpali egwuregwu edoziri na Victorian afọ London. Ọ na-kwajuru na elekere na daga, mpụ, na niile Trapping nke mpụ na onye sabo. Ị n'anya na-ekiri James Bond? Ọ bụrụ na ị na-eme, ebe a bụ ohere impersonate James Bond-enweghị atụ egwu plagiarism RAP. Players Pụrụ isonyere na fun, gbalịa mee ihe ịma aka Enigma, na-enweta na mbụ akụkọ. Ọzọkwa, ị nwere ike ibido ọtụtụ ahụmahụ na gị ọchịchọ iji mebie Queen Obi devilish nkata.
6. Criminal Ileba
Platform: Androids n'elu ikpo okwu version 4.0
Criminal ikpe atụmatụ ikike ichoputa mpụ Mpaghara ke a obi ọjọọ na Come obodo. Players Na-enwe ike igwu egwu na enyi ma na-aka pụta ka ndị kasị mma tutuntu, ichoputa clues, ma na-amụ ụdị aka ịchọta àmà; ịjụ enyo enyo na ndị àmà ụfọdụ ọchịchọ ajụjụ, n'ikpeazụ weghara killers, na-ewetara ha ikpe ziri ezi.
7. Prince Peasia (Omuma)
Olee otú ị ga-achọ ịdị na ama Prince Peshia na a ozi ịzọpụta gị Princess ọbụna ma ọ bụrụ na ọ bụ na a egwuregwu n'okpuru surreal ọnọdụ? Ị pụrụ ibi gị nrọ Otú ọ dị ezi uche site na-akpọ egwuregwu a na-enweta obi ụtọ na njem nke a nnọọ archetypical egwuregwu.
8. Na-akpata Society
Mgbe chọrọ inyocha ọtụtụ Captivating ụwa? Ugbu a, i nwere ohere a na free zoro ihe egwuregwu n'ihi na android; na-njikere iso obodo nke ndị mmadụ na ahụkebe nkà ijupụta mgbidi na kee eziokwu na kpokọtara ụwa.
Ị ebudatara kụrie-kụrụ? Bụrụ na ọ bụghị ime otú ugbu a n'ihi na 2020 My Country bụ a ndị na-elu na ya. Egwuregwu dị elu na ina-enwe ihe karịrị nde 20 Player n'ụwa nile. Ọ na-agụnye eke ma ịchịkwa ultramodern obodo. Ọ bụrụ na ị mgbe rọrọ nke na-achị achị ụwa ma eleghị anya mkpa a amalite, 202 mba m bụ ezigbo n'elu ikpo okwu iji mezuo gị nrọ; ọ bụ ezie na ọ bụ surreal - atleast ị ga-esi nwere gị 5 nkeji nke ebube.
Platform: Android 2.3 gbakwunyere
Ị na-akwado nke ikwu Kardashian? Ọ bụrụ na ị bụ, sonyere ya na-acha uhie uhie kapeeti njem na jidere ohere na-emepụta kpọmkwem nke gị ga-abụ celebrity ọgụgụ na-amalite ije gị ama na mfep.
Ebe a na ị nwere ya, ndepụta nke kasị mma 10 free zoro ihe egwuregwu n'ihi na Androids. Ọ mejupụtara nke dị iche iche mgbaghoju anya egwuregwu Genres sitere na site egwu ka omimi, na-akpali akpali-acha uhie uhie carpets njem mfe fun na excitements.
> Resource> emulator> Best Zoro Object Games maka Android